We She Me: ကင်ဘာရာ ခရီးစဉ် - ပါလီမန် အဆောက်အဦး
နောက်တစ်နေကျတော့ ဟိုတယ်မှာ မနက်စာ စားပါတယ်။ မနက်စာက မဆိုးပါဘူး။ မနက်စာ စားပြီးတော့ ၈ နာရီ ထိုးနေပြီ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်တော့ Day Light Saving က အဲဒီနေ့မှာ စတော့ တစ်နာရီ ရှေ့တိုးလိုက်ရတဲ့အတွက် ၉ နာရီ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကင်ဘာရာ ရောက်ပြီး ပါလီမန် အဆောက်အအုံကို မရောက်လို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ အဲဒီကို အရင် သွားကြတယ်။ ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်မှာ အကြီးအကျယ်ဆုံး အဆောင်အဦးတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၁.၁ ဘီလီယံကျော် အကုန်အကျခံ ဆောက်ထားတာ ဆိုတော့ သွားကြည့်မှ ဖြစ်မယ်။ မနေ့ညကတော့ ညဖက် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ ဆိုပြီး တစ်ခေါက် သွားကြသေးတယ်။ ဟိုတယ်နဲ့ နီးနီးလေး ဆိုတော့ ခဏအတွင်း ရောက်သွားပါတယ်။
ပါလီမန် အဆောက်အဦးတွေမှာ သူ့ဝိသေသနဲ့ သူ ရှိပါတယ်။ ဗဟို တရားရုံးတို့လို ရုံးအဆောက်အဦးတွေ (ဥပမာ ပင်တဂွန်) ကဲ့သို့ တခြား အဆောက်အဦးတွေလို မဟုတ်ဘဲ ပါလီမန်အတွင်းမှာ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိရပါမည်။ ပါလီမန်ဟာ ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုရပါမည်။ ပါလီမန်မှာ တရားဥပဒေ ရေးဆွဲ ပြဌာန်းနိုင်ရပါမည်။ ရွေးကောက်ပေးထားတဲ့ အစိုးရကို အတည်ပြု ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။ အဲဒီ အစိုးရကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲနိုင်ရပါမည်။
ပါလီမန် အဆောက်အအုံကြီးက အင်မတန်ကြီးပေမယ့် ထုကြီး ထည်ကြီးနဲ့ ပုံတုံးတုံးကြီး ချဆောက်ထားသလို မဟုတ်ပါဘူး။ ကား အစင်း ၂၀၀၀ ရပ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေကိုလည်း အောက်မှ မြှုပ်ထားပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆို ပင်တဂွန် အဆောက်အအုံနဲ့ လုံးဝပြောင်းပြန်ပေါ့။ အထူးခြားဆုံး အမြင်သာဆုံး အချက်ကတော့ အဆောက်အအုံ အလယ်ထိပ်မှာ အလံတိုင် အကြီးကြီး ရှိတာပါပဲ။ အဝေးကနေ ကြည့်လိုက်ရင် အဆောက်အဦးရယ်လို့ မမြင်ရဘဲ Capital Hill တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ဧရာမ အလံတိုင်ကြီးကိုပဲ မြင်ရပါတယ်။ အလံတိုင်ကြီးက ၈၁ မီတာမြင့်ပြီး အလံရွက်က တင်းနစ်ကွင်း တ၀က်ကျော်ရှိပါတယ်။ မျက်နှာစာကို လက်နဲ့ ဖြတ်ထားတဲ့ ဂရက်နိုင် ကျောက်ပြားတွေနဲ့ (Aborigin) ပြည်ရင်းသား အနုပညာရှင်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး အလှဆင်ထားတာပါ။ (Indigenous) ဒေသခံတွေကို အလေးထားတယ် ဆိုတာပြထားတာပါ။
ပါလီမန် အဆောက်အအုံ အသစ်ကြီးကို ၁၉၈၈ မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူ့အရင်က ယာယီဆိုပြီး ဆောက်ထားတဲ့ ပါလီမန် အဆောက်အအုံ ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ အသစ်ရယ်၊ (Provisional Paliament House) အဟောင်းရယ်၊ (Australia War Memorial) သြစတြေလျ စစ် အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးက တတန်းတည်းပါ။ ရွှေတိဂုံရယ်၊ ပြည်သူ့ ရင်ပြင်ရယ်၊ လွှတ်တော်ရယ် တတန်းတည်းလိုပေါ့။ အသစ်ကြီး ဆောက်ပြီးတော့ ယာယီ ဆောက်ထားတဲ့ ပါလီမန် အဆောက်အအုံက နှစ်ခုကြား တည့်တည့်မှာ ကန့်လန့် ကန့်လန့် ဖြစ်နေလို့ ဖြိုချမလို့ လုပ်ပြီးမှ သမိုင်းဝင် အဆောင်အဦး ဆိုတော့ မဖြိုချရက်လို ထားထားပြီး ပြတိုက်နဲ့ ပန်းချီပြခန်း အဖြစ် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီပုံမှာ ကျွန်တော်တို့က ပါလီမန် အဆောက်အဦး အသစ်ကို မျက်နှာမူနေတာ ဖြစ်ပြီး နောက်က ဖြူဖြူ အဆောက်အဦးဟာ ပါလီမန် အဟောင်းပါ။ ဟိုးအဝေးက တောင်ခြေမှ မှိုင်းပြပြ အဆောင်အဦးဟာ စစ်သမိုင်းပြတိုက်ပါ။ ယာယီ ပါလီမန် အဆောက်အဦးတုန်းက နှစ် ၅၀ သုံးနိုင်မည် ဆိုပြီး တွက်ချက် ဆောက်ခဲ့ပေမည့် ၆၁ နှစ် သုံးလိုက်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ အမတ်တွေများ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ များလာတော့ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းပါပဲ။ ပါလီမန် အသစ်ကြီးကတော့ နှစ် ၂၀၀ အသုံးချနိုင်မည် ဆိုပြီး တွက်ချက် ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာဆိုရင် နှစ် ၂၀ ရှိနေပါပြီ။
အပြင်ဘက်မှာ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြပြီး အတွင်းကို ၀င်ကြပါတယ်။ အဆောက်အဦးကြီးက ကြီးလွန်းတော့ အတွင်းမှာ အတော်ကို သွားရတယ်။ ၀င်ဝင်ချင်းမှာ ရှိတဲ့ (Foyer) ခန်းမကြီးက တိုင်လုံးတွေက ကျောက်ပြားတွေ ကပ်ပြီး အလှဆင်ထားပါတယ်။ ကျောက်ပြားတွေ အရောင်က စိမ်းညိုရောင်တွေ ဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျ အနှံအပြားမှာတွေ့ရတဲ့ ယူကလစ်ပင်တွေ အရောင်ဟာ သြစတြေလျကို ကိုယ်စားပြုတာပါပဲ။ အမည်းရောင် ကျောက်ပြားတွေမှာတော့ အခွံမာ ရေနေသတ္တ၀ါတွေရဲ့ ကျောက်ဖြစ် ရုပ်ကြွင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ Captain Cook တို့ သြစတြေးလျကို စတင်တွေ့ရှိတုန်းက မှတ်တမ်း တင်ထားတဲ့ အကောင်တွေပါ။
အဲဒါနဲ့ ကပ်ရက်မှာ The Great Hall ဆိုတဲ့ ခန်းမကျယ်ကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီခန်းမကျယ်ကြီးကိုတော့ အထွေထွေ သုံးအပြင် ပြည်သူလူထုကိုပါ သုံးဖို့ ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့တို့ အနီးက ကင်ဘာရာ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့နှင်းသဘင်တို့ ဘာတို့အတွက် ခမ်းမကြီးကို ပေးသုံးပါတယ်။ ခန်းမကြီး တစ်ခုလုံးကို သစ်သား ခင်းထာပြီး ဘက်စကတ်ဘော ဆော့လို့ ရလောက်အောင်ထက်ကို အများကြီး ပိုကျယ်ပါတယ်။ ခန်းမထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ ၂၀ x ၉ မီတာ အကျယ် ရှိတဲ့ Tapestry (ရောင်စုံ ချည်ဖြင့် ပုံဖော် ထိုးထားသော) ပန်းချီကားကြီးပါပဲ။ နယူးဆောက်ဝေး ပြည်နယ်က ယူကလစ်တောပုံကို ရေးဆွဲထားတဲ့ပုံကို ချည်ပြန်ထိုးထားတာပါ။ မူရင် ပန်းချီကားကိုလည်း အပေါ်ထပ်က ပြခန်းမှာ ပြသထားပါတယ်။ ချည်ထိုးပုံမှာတော့ ဟေလီကြယ်တံခွန်ကို မူရင်း ပန်းချီဆရာ (Arthur Boyd) ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ထည့်ထားပါတယ်။ ဒီပန်းချီကားကြီးက ကမ္ဘာအကြီးဆုံး ချည်ထိုးပန်ချီးတွေထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ချည်ထိုးသမား ၁၃ ယောက်က ၂ နှစ်ခွဲကျော် အချိန်ယူပြီး ယက်ယူထားတာပါ။
ပါလီမန် အဆောင်အအုံကြီးဟာ အလျား မီတာ ၃၀၀၊ အနံ မီတာ ၃၀၀ ရှိပါတယ်။ အဆောက်အအုံ တစ်ခုလုံးရဲ့ မျက်နှာပြင် အကျယ်အ၀န်း ဧရိယာ စတုရန်း မီတာ ၂ သိန်းခွဲ ရှိပါတယ်။ (ပင်တဂွန်က ၆ သိန်း ကျော်ပါတယ်။) ဒီအဆောက်အဦးကြီး ဆောက်ရန် သုံးခဲ့တဲ့ ဘိလပ်မြေနဲ့ဆိုရင် Opera House ၂၅ လုံးစာ ဆောက်လို့ ရပါတယ်။ အခန်းပေါင်း ၄၇၀၀ ကျော် ရှိပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ လူ ၂၀၀၀-၃၀၀၀ လောက် အလုပ်ဆင်းနေပါတယ်။ အလယ်မှာ Aborigin တွေ သုံးတဲ့ ဘွန်မာရင် (Boomerang) နှစ်ခုကို ကပ်ထားသလို နံရံအကွေးကြီး နှစ်ခုရှိပြီး တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ လွှတ်တော်တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပဒေပြု အထက်လွှတ်တော် (Senate) က အနောက်အရပ်မှာ ရှိပြီး အောက်လွှတ်တော် (House of Representative) က အရှေ့ အရပ်မှာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ အဆောင်တွေမှာ အမတ်တွေ ငြင်းကြ ခုံကြတာတွေကို TV ကနေ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ Channel တစ်ခုကနေ စောင့်ကြည့်မယ်ဆို စောင့်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ တစ်ပါတီ နီးနီး ဖြစ်နေတဲ့ စင်္ကာပူက အမတ်တွေလိုတော့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ စာတမ်း ဖတ်ကြတာ မဟုတ်ဘဲ အပြန်အလှန် ငြင်းခုန် ရန်ဖြစ်နေကြတာကို တီဗွီမှာ ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းသလို့ ရယ်လည်း ရယ်ရပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်တို့ ကိုရီးယားတို့လိုတော့ ထပြီး ထီးနဲ့ ရိုက်တာ ဖိနပ်နဲ့ ပစ်ပေါက်တာမျိုးတော့ မရှိဘူးပေါ့။ ဒါတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ပါလီမန်မှာ ပါတီစုံက အမတ်တွေ ရန်ဖြစ်နေရတာနဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့ စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟာ သြစတြေးလျ ပါလီမန်ကိုတော့ ရည်ညွှန်းဟန် မတူပါဘူး။
(House of Representative) အောက်လွှတ်တော်မှာ Question Time ရောက်ပြီဆိုရင် အတိုက်အခံ ပါတီက လက်ရှိ အာဏာရ ပါတီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မေးမြန်း စစ်ဆေး ငြင်းခုန်ကြပါတယ်။ ထုံးစံ အတိုင်း အာဏာရ ပါတီတွေက ထိုင်ခုံ များများ ဦးထားပါတယ်။ အထက်ရော အောက်လွှတ်တော်မှာပါ အာဏာရ ပါတီက (Speaker) လွှတ်တော် ဥက္ကဌရဲ့ လက်ယာဘက်မှာ ထိုင်ကြပြီး အတိုက်အခံတွေကတော့ လက်ဝဲ သမားတွေပါ။ ပါတီ အသေးလေးတွေက အမတ်တွေကတော့ ထိုင်ခုံ အကွေးတွေမှာ ထိုင်ကြပြီး သူတို့ကို ကြားနေတွေလို့ ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း လာရောက် ကြားနာနိုင်ပြီး ပြည်သူတွေ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေက (အပေါ်မှာ) ရှိပါတယ်။
အဆောက်အဦးကြီးက ကြီးမာပေမည့် ထုကြီး ထည်ကြီး အတုံးလိုက် မဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျ ဆောက်ထားတဲ့ အတွက် အထဲမှာ ပိန်းပိတ်ကြီး ဖြစ်မနေပါဘူး။ မှန်ပြတင်း အကြီးကြီးတွေနဲ့ သဘာဝ အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း ရအောင် ဆောက်ထားပါတယ်။ အပေါ်ထပ်မှာ ပန်းချီ၊ ပန်းပု အနုပညာ ပြခန်းတွေ ရှိပြီး သြစတြေးလျကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက်ရာတွေ ပြသထားပါတယ်။ ပါလီမန် အဆောင်အဦးဟာ အနုအညာနဲ့ ဗိသုကာ ပေါင်းစပ်ရာမှာ အောင်မြင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာမှာ သတင်းမွှေးပါတယ်။ နေရာတိုင်း နေရာတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတာပါ။
ဘွန်မာရင်းလို အကွေးကြီး နှစ်ခုရဲ့ အမိုးတွေပေါ် မြက်ခင်းကြီး ဖြန့်ခင်းထားပြီး အများ ပြည်သူတွေ တက်ရောက် ကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။ ပါလီမန် အဆောက်အဦး ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ ကြည့်မည်ဆိုရင် စနစ်တကျ အကွက်ချ ဆောက်ထားတဲ့ ကင်ဘာရာမြို့ကို အတော် ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ဟိုးအဝေးက စစ်မှတ်တမ်း ပြတိုက်၊ ရေကန်နဲ့ ပြတိုက်တွေ ဖြောင့်ဖြူးနေတဲ့ လမ်းတွေကို အတိုင်းသား မြင်နေရပါတယ်။ တိုင်းပြည် တစ်ပြည်ရဲ့ အဓိက နေရာဖြစ်တဲ့ ပါလီမန် အဆောက်အဦးရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ် ရောက်နေတယ် မထင်ရဘဲ တောင်ကုန်း တစ်ခုပေါ်က မျက်ခင်ပြင်ပေါ် ရောက်နေသလိုပါပဲ။
ကင်ဘာရာ သွားလည်တာမှာ ပါလီမန် အဆောက်အဦးကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ တကယ်တော့ ပါလီမန်ဟာ ကင်ဘာရာရဲ့အထင်ကရ သတ်သတ်မဟုတ်ဘဲ သြစတြေလျရဲ့ အထွတ်အခေါင်ပါပဲ။
ကင်ဘာရာ ခရီးစဉ် ဆက်ရေးပါဦးမည်.....
| FLAGS: Australia , Travel
khin oo may - 10/13/08, 12:43 AM
စိုးထက် - Soe Htet ! - 10/13/08, 1:50 AM
Moe Cho Thinn - 10/13/08, 2:43 AM
ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံလေးတွေကလဲ လှတယ်။ သမီးလေး မြက်ခင်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံလေးကို ကြိုက်လိုက်တာ။ ယူကလစ်တောကိုလဲ ငေးသွားပါကြောင်း။
shin - 10/13/08, 12:58 PM
Like it...There may havealot of things to visit in Australia compare to Singapore...Wanna go there once..
Dr. Nyan - 10/13/08, 1:22 PM
Andy Myint - 10/19/08, 3:56 PM
အားနည်းနည်း စိုက်ရတာပေါ့ မခင်ဦးမေရယ်.. လက်သည်ချည်းပဲ အားကိုးလို့လည်း ဘယ်ရမလဲ ..အဲ.. ဘာတွေ ပြောနေပါလိမ့် ရှုပ်ကုန်ပြီ
ဒီတစ်ခါ ကိုစိုးထက်ရဲ့ :) ကို `ကျွန်တော်လည်း သွားဖူးတယ်ဗျ။ အန်ဒီရေးထားတာ ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့တာတွေနဲ့ တူတယ်´ လို့ ယူလိုက်မယ်။ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ဟက်ဟက်
ယူကလစ်တော ပုံက အပြင်မှာ ကြည့်ရင် ပိုကောင်းတယ် မချိုသင်း။ သမီးက အဲဒီလိုမျိုး နင်းလျှောက်ရရင် သိပ်ကြိုက်တယ်။
Definitely, Shin. There are much more places in Oz to visit. Of course, size of AU and SG are different. But in SG, we can go to near by countries for cheap air far.
ကျေးဇူး ဒေါက်တာ ဉာဏ်